पत्रपत्रिकामा देश : अझै ‘माननीय’ महरा !
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजपत्रपत्रिकामा देश : अझै ‘माननीय’ महरा !
विराटनगर, १८ असोज । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने कान्तिपुर दैनिकले महरा अझै माननीय शीर्षकमा समाचार छापेको छ । यौन दुर्व्वयहार लागेर सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरा अझै नेकपाका सांसद् पदमा छन् । उनलाई आफ्नै सचिवालयकी रोशनी शाहीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि संसद् सचिवालयले सभामुख र सांसद् पद तत्काल छाड्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उनले सभामुख पदबाट मात्र राजीनामा दिए । नेकपाका एक उच्च नेताका अनुसार महराले सांसद पद कायमै राख्नका लागि कसरत गरिरहेका छन् । यद्यपि, महरा राजनीतिक ऐन अनुसार नेकपाका सदस्य भइसकेका छन् । किनकी, उक्त ऐनको दफा ३२ मा पदाधिकारी हुँदा दलबाट राजीनामा दिएको विषयलाई दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ । यसैले उनले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ या त पार्टी छोड्नु पर्ने हुन्छ ।
यता, महरा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी गत असोज १२ गते राति भएको घटना अनुसन्धान गर्न आयोगका निर्देशकको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ । आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समिति सदस्यको नाम भने खुलाइएको छैन ।